ny fanafoanana ny fanagiazana ireo fananana tsy ara-dalàna alohan' ny fiampangana ; izany hoe tsy giazana miaraka amin’ny fisamborana ilay olona varohirohy ny fananany fa miandry izay fanapahan-kevitry ny fitsarana. Eo ihany koa ny fampihenana ny fe-potoam-piasana sy fibaikoan`ny mpandrindra nasionaly sy ireo mpitsara. Ireo teboka telo lehibe ireo dia mendrika kosa fampahafantarana sy fanazavana amin` ireo mpisehatra nasionaly rehetra, hoy ny komity momba ny fiarovana ny fahitsiana (CSI). Mandra-pahatongan' ny fivoriana parlemantera manaraka dia hampiasaina hanombohana ity fifanakalozan-dresaka amin'ny governemanta sy ny parlemanta ity volavolan-dalàna ity mba handrefesana tsara ny ambaratonga fanovana toy izany, hoy ihany izy. Raha tsiahivina, ny 02 jolay lasa teo dia nandany, taorian' ny fanitsiana, ny volavolan-dalàna mifehy ny rafitra misahana ny ady amin` ny kolikoly (Pôles Anti-Corruption) ny teo anivon` ny Antenimieram-pirenena. Ny 3 jolay kosa dia nanapa-kevitra ny hampihemotra ny fandinihana azy amin' ny fivoriana parlemantera manaraka ny teo anivon` ny Antenimierandoholona.